Mepee ngwa MacOS Sierra ngwa ngwa na iwu njikwa a | Esi m mac
Mepee ngwa ngwa na MacOS Sierra site na iwu nke a
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | MacOS Sierra, Nkuzi, ọtụtụ
Ọtụtụ nsogbu na-eme mgbe arụnyere sistemụ arụmọrụ ọhụrụ sitere na ịwụnye sistemụ arụmọrụ n'elu nke ọzọ. Ọ bụ eziokwu na ndị Apple programmers na-etinye nrụnye ndị a na akaụntụ, mana ụbọchị anyị ma ọ bụ ntinye nke ngwa niile na-eme ka akụrụngwa anyị jiri nwayọ nwayọ nwayọ belụsọ ma anyị wụnye sistemụ arụmọrụ anyị site na ncha.
Agbanyeghị, enwere usoro aghụghọ ga - enyere anyị aka ihicha sistemụ Mac anyị ntakịrị, nke anyị ga - eji merie ọnwa n’enweghị ịtinye na ncha. Taa anyị na-akọwa otu esi agbalite mmeghe nke ngwa na MacOS Sierra.
Enwere akụkụ nke usoro a maara dị ka akọrọ ike cache. Ihe ebe nchekwa a na-eme bụ ibu ngwa ngwa arụnyere na nso nso a ma jikọta ha na ihe ndị nkịtị nke sistemụ arụmọrụ.
Na nwụnye ma ọ bụ karịa oge, kwuru cache nwere ike merụọ, ya bụ, anaghị arụ ọrụ nke ọma. N'ezie ọ gaara eme gị ma ọ bụrụ na ị chọpụta na mgbe ịmalitere sistemụ ma ọ bụ mepee ụfọdụ ngwa, usoro ahụ dị nwayọ nwayọ.
Ihe ngwọta bụ ikpochapụ ma weghachite oghere ahụ na-emekọrịta ihe. Iji mee nke a, mepee ọnụ ma tinye iwu ndị a:
sudo update_dyld_shared_cache -di ike
Ugbu a ọ bụ oge iji chọpụta na ọ bụ kpọmkwem ọdịda a. Iji mee nke a, ị ga-amalitegharị kọmputa ma nyochaa na ngwa ahụ ga-emepe ngwa ngwa. Nsonaazụ dị mfe ịlele. Na ngwa "arọ" ma ọ bụ ndị na-abụghị nwa afọ Apple ngwa, nke na-elegharakarị buut ikike tụnyere ndị ọzọ atụmatụ, anyị ga-edebe a ịrịba mma na oge na-emeghe.
Ọ bụrụ na usoro a anaghị edozi mmalite nwayọ nwayọ, ọ nwere ike ịbụ n'ihi nsogbu ọzọ ma ọ bụ nchịkọta ọtụtụ. Ọ dị mma mgbe niile ma bụrụ ihe amamihe dị na ya maka itinyeghachi sistemụ ahụ mgbe ị chọpụtara na ọ nweghị mmiri nke Macs ndị ọzọ. Nwere ike ịlele m si na Mac ozi ma ọ bụrụ na nke a bụ ikpe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Mepee ngwa ngwa na MacOS Sierra site na iwu nke a
Microsoft Surface Studio bụ azịza Microsoft na iMac
Oghere Launchpad ugbu a dochie iCloud ""lọ"